ठूलो व्यञ्जनहरु - तारेको झिंगा कसरी खाना पकाउनु!
प्रश्न "कसरी बनाउने झिंगा तला र उबला र स्थिर?" धेरै महिलाहरु द्वारा सोधे। यहाँ केही धेरै सरल तर एकै समयमा छुट्टी व्यञ्जनहरु मा छन्।
सुरु गर्न, ग्रील्ड को झिंगा, महाराज कसरी ध्यान - "मसालेदार"। यो नुस्खा लागि, तपाईं दुवै ताजा र स्थिर वस्तुहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
पहिले तपाईं ज्योति र सजिलो marinade तयार गर्न आवश्यक छ। यो लसुन तीन चोट लौंग, 1/3 कप तेल, टमाटर केचप को 1/4 कप, सिरका दुई ठूलो spoonfuls (रक्सी), बीम कटा तुलसी, नुन र आधा सानो चम्चा बाट बनेको छ कायेन्ने मरिच। को marinade झिंगा को एक पाउन्ड सबै सामाग्री र स्थान मिश्रण। , Skewers मा स्ट्रिङ जगाएर कहिले काँही, त्यसपछि एक घण्टा तिनीहरूलाई छोड्नुहोस्।
कुक यो पकवान एक बन्द दुवै हुन सक्छ बिजुली, ग्रिल र सडक मा ग्रिल। यो दुवै पक्षले दुई वा तीन मिनेट लागि झिंगा तलना पर्याप्त हुनेछ। सलाद, सुखा आलु, लसुन र रोटी राम्ररी सेवा गर्छन्।
अब झिंगा टेम्पुरा "कोकोस" कसरी तयार गर्न भन्नुहोस्। यो मूल बियर नाश्ता को एक महान संस्करण हो।
भोजन को तयारी गर्न पाउँदा। सुरु गर्न, तपाईं एक कचौरा मा अन्डा, पीठो को आधा कप, बियर को आधा बोतल मिश्रण गर्न आवश्यक छ। अर्को, यो पुच्छर द्वारा झिंगा लिन कुटपिट तिनीहरूलाई डिप, एक बिट बन्द हल्लाइन्छ र नरिवल गुच्छे मा डूबा। तपाईं frying सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
तला झिंगा पकाउन कसरी अघि, राख्नु आवश्यक छ , मोम पेपर एक घण्टा उनको र चिसो मा तयार नमूनों राखे। यस समयमा, एक गहिरो fryer मा 175 डिग्री सेल्सियसमा तेल गर्मी र झिंगा मा ड्रप। समाप्त पकवान सुनको खैरो (यो केवल दुई तीन मिनेट हुनेछ) बन्दछ। अर्को, forceps को मद्दतले बाहिर झिंगा पुल र बोसो थाक एउटा कागज तौलिया तिनीहरूलाई राख्नु। यस कुटपिट र नरिवल गुच्छे को अन्त सम्म सम्म पकाउन जारी। को सिफारिस न्यानो सस सेवा सुन्तला मुरब्बा, तोरी र सहिजन बराबर अनुपात मा मिश्रित।
अब कसरी "जापानी" तला झिंगा तयार गर्ने बास।
किलोग्राम chilled झिंगा एक कचौरा र सिजन तिनीहरूलाई आधा नुन को एक सानो चम्चा, मरिच र लसुन पाउडर को नै रकम राख्न आवश्यक छ। पीठो एक अलग पकवान मिश्रण कप र लाल शिमला खुर्सानी को एक ठूलो spoonful मा। अर्को, एक कचौरा मा खन्याउन र अन्डा नुन को एक चुटकी यसलाई whisk। अब हामी झिंगा तलना गर्न सुरु गर्नुहोस्। यो गर्न, Boiling राज्य गर्न वनस्पति तेल गर्मी। पहिलो यो पिठो मिश्रण मा, को अन्डा मा त प्रहार र ब्रेडक्रंब मा धेरै राम्रो तरिकाले बन्द पतन, यो पुच्छर द्वारा प्रत्येक झिंगा लिनुहोस्। frying प्रक्रिया पाँच अधिक मिनेट लिन हुँदैन। पैन देखि झिंगा गर्न अतिरिक्त बोसो "बाहिर" कागज तौलिया मा राख्न सिफारिस गरिएको छ। कुनै पनि जापानी सस संग राम्रो तरिकाले सेवा गर्छन्।
तर पटक जब अतिथि "को कगार मा" हुन्। यस मामला मा, त्यहाँ गर्न तर कसरी पकाउन बाँकी केही छ झिंगा पकाएको र स्थिर। यो पर्याप्त लागि फ्रीजर तिनीहरूलाई प्राप्त र यो नुनीन पानी राख्न। तिनीहरूले पहिले नै तयार छन् किनभने तिनीहरूले, अब दुई मिनेट भन्दा उम्लिरहेको पछि पकाएको गर्न आवश्यक - वास्तवमा तिनीहरू केवल defrost र तातो बनाउन आवश्यक छ।
ओवन मा ट्राउट: साँचो Gourmets लागि नुस्खा
स्क्वास fritters: व्यञ्जनहरु
मशरूम कसरी अचार गर्न?
आर्मेनियाली केटाहरू 'नाम। परम्परा र modernity
आलु कसरी बढ्न र राम्रो फसल प्राप्त गर्न
किन fleas बारेमा सपना?
Tatyana Denisova। सफलता सडक
प्राकृतिक सामाग्री देखि रोचक शिल्प। स्याउ को ट्रयाक बनाउन मा मास्टर-वर्ग